किसानको साथी गाइने किरा सङ्कटमा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौँ । पानीका स्रोत र मुहान प्रदूषित हुँदा दुर्लभ गाइने किरा सङ्कटमा परेको छ । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तरी भेग र नेपालको पूर्वी भेगमा पाइने ‘रिलिक्ट हिमालयन ड्र्यागन फ्लार्ई’ नामक गाइने किरा सङ्कटमा परेको हो ।
“कालो शरीरमा पहेँला थोप्ला र सुनौला पखेटा भएको यो दुर्लभ किरा हो । हाल यस किरा पानी दूषित हुँदै जाँदा सङ्कटमा परेको छ,” अध्ययनकर्ता भैया खनालले भन्नुभयो, “यो किरा प्रदूषणको सिकार भएको हो । ” शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमूल्य सम्पत्ति भए पनि यसको संरक्षण र अध्ययनमा त्यति ध्यान नगएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
स्वच्छ पानीमा हुर्कने यस जीवको अस्तित्वमा मानव उत्पादित फोहोरले असर पारेको खनालले बताउनुभयो । “नदीमा सिधै फ्याँकिने मानव निर्मित ढल र फोहोरका कारण नदी प्रदूषित भएसँगै मुहानसमेत प्रदूषित हुन थालेकाले यसको प्रजननसँगै हुर्काइमा सिधा असर परेको छ,” खनालको विश्लेषण छ । पानी प्रदूषित भएकै कारण किरा सफा पानीको खोजी गर्दै अन्यत्र पलायन हुन्छ । यतिमात्र होइन, बढ्दो मानव जनसङ्ख्याको चाप, वन अतिक्रमण, माटोको गुणस्तरमा ह्रास, सहरीकरण, धुलो र धुवाँले यसको बासस्थानमा असर गर्दै गएकाले संरक्षणका लागि थप अध्ययन र सचेतना जरुरी रहेको खनालको भनाइ छ ।
वातावरणविद्का अनुसार पोथी ड्र्यागनफ्लाईले पानी नजिकका बिरुवामा फुल पार्छ र फुलबाट बच्चा निस्केपछि सोझै पानीमा झरेपछि थप विकास हुन्छ । करिब छ वर्षको हुर्काइमा झन्डै चार–पाँच वर्ष यसले पानीमा बिताउँछ । हुर्किएको लार्भा बिरुवाको पातमा बस्छ र केही समयमा ड्र्यागनफ्लाई बनेर उड्छ । “हुकाईको समय लामो भए पनि वयस्क भएपछि भने यो जम्मा दुई महिना बाँच्छ, अहिलेको समय वयस्क ड्र्यागनफ्लाई देखिने समय हो,”
यो गाइने किरा रिलिक्ट हिमालयन ड्र्यागनफ्लार्ईका नामले चिनिन्छ । यसको वैज्ञानिक नाम इपिओफेलबिया लेड ल भनेर नामकरण भने अध्येता आर.जे. टिलियार्सले गर्नुभएको थियो । जापानमा नेपालको जस्तै देखिने ड्र्यागनफ्लार्ईको नाम भने इपिओफेलबिया सुपरस्टिस हो ।
शिवपुरीमा रिसोर्ट र केबुलकार बनाउँदा दुर्लभ जीवको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने विज्ञ डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । हिमाल छोएका क्षेत्रको एक हजार आठ सय मिटरदेखि तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइसम्म यसको अस्तित्व रहने सन् २०११ मा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।